Lapho kuqala kushisa wonke umuntu ufuna ukuba azigcine ngakho kamuva sikhumbule ukuthi kuze ehlobo elilandelayo. Othile othanda ukugibela izintaba, abanye abantu bakhetha uphumule esiqhingini esisendaweni eshisayo, umuntu uthanda ukuba yedwa at-cottage ogwini echibini ethule. Futhi abanye uthanda ulwandle futhi umfula Cruises emkhunjini. Akunandaba lapho futhi kanjani ukuchitha iholide yabo, inqobo nje kuze kube sekupheleni ukuzizwa waphumula. Sikhetha emfuleni Cruises, okuyinto ukukhuthaza ukuphumula ephelele, ukuzilibazisa kokucetshiswa ngokomoya.
Izici ukuhamba phezu kwemifula Russia
River Cruises, njengoba kuqhathaniswa kolwandle, kunezimo ezithile. Okokuqala, izivakashi emfuleni imikhumbi bazizwa belondekile ngoba kukhona ogwini ebonakalayo njalo; Okwesibili, kabuthaka umkhumbi ivumela abagibeli ujwayelene indawo ogwini lwasenyakatho-emizini, emizaneni, izakhiwo ezithakazelisayo kanye izikhumbuzo, ngisho ngenkathi asele ebhodini; wesithathu, ayifakiwe ngisho ewa ezincane, okungase kubangele isicanucanu; Okwesine, khona "amasayithi oluhlaza" - ibanga kusuka emadolobheni izindawo zemvelo ezinhle lapho ungakhululeka, ukuthamela ilanga ogwini, ukubhukuda umfula noma ehlathini futhi epikinikini ngaphansi isihlahla se-oki lisakazeka. Ngaphezu kwalokho, cruise emfuleni - .. Kuyinto eziningi hambo ezithakazelisayo futhi ezemfundo ngayinye emadolobheni kufakwe umzila, imibukiso kumnandi, nengangibajwayele ezithakazelisayo, njll Ngokwesibonelo, Cruises phezu iVolga e Volgograd, kuye ngokuthi isiqondiso umzila, vumela ukuba bajwayelane amadolobha amaningi iVolga. Ngokungafani nezwe travel, njalo awudingi ukuqoqa ipotimende ukushintsha amahhotela, kunyakaze ku ibhasi noma isitimela, nokunye. D. Lolu hlobo ubulungiswa, travel lingachazwa ngokuthi awanaki kakhulu futhi zikhululekile. Yingakho isithakazelo esikhulayo zezivakashi Russian ukuhamba emifuleni bomdabu Russian njalo ngonyaka.
Cruises phezu iVolga
Omunye emifuleni edume kunazo Russian unguNina iVolga. Kanye usebe lwawo eziningi emadolobheni amakhulu - zezimboni kanye namasiko izikhungo - Yaroslavl, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Cheboksary, Ulyanovsk, Astrakhan Togliatti, Saratov, Volgograd. Ngenxa emiseleni yokufakelwa iVolga ehlangene eMfuleni eMoscow, Don kanye neminye imifula, ngakho kukhona ithuba ukuphuma kwemizi yasesiFundeni iVolga e Moscow, Rostov-on-Don futhi Petersburg. Ngokwesibonelo, izivakashi abakhetha cruise phezu iVolga e Volgograd enhloko-dolobha kungaba nje kwamasonto ambalwa ukuzohlola Kazan ezikhangayo, Nizhny Novgorod, Samara, Uglich, eMoscow nakwamanye amadolobha. Uma umzila - "Volgograd-Saint Petersburg", Rotor bazokwazi ukuthola khona amanzi enhloko-dolobha enyakatho, ukuchitha izinsuku ezimbili ongenakulibaleka, bese ngibuyela ekhaya, endleleni evakashela emizini angaphezu kweshumi nambili zasendulo nezanamuhla. Yiqiniso, kungcono ngempela uma uzothatha uhambo olude, nakho kubiza imali. Nokho, kukhona njalo zezivakashi Akungikhathazi ngenyanga bakhishwe befuna komuzi, ngcono nerve futhi ujabule.
Indlela ukukhetha umzila?
Ethandwa kakhulu kukhona sezinsuku ezingu-3-4 Cruises emkhunjini kusukela Volgograd ukuba Samara futhi Astrakhan okungukuthi, edolobheni eliseduze. Ukuthandwa lezi imizila kuchazwe, okokuqala kunakho konke, izindleko ongaphakeme, kanye nekhono abe ngempelasonto enkulu enwetshiwe, isibonelo, ngamaholide. River Cruises kusukela Volgograd kule mizi zihlabeke ziphoqa phakathi abafundi basesikoleni esiphakeme noma abafundi abasanda kuphothula umatikuletsheni abafisa ngomkhumbi ukuchitha Prom yabo ebusuku. Ngezinye izikhathi imishado isikebhe kuthiwa kugujwa. Lo mbono yokuqala celebration wedding usuku ngalunye oludlulayo is kuyanda phakathi abakhe emizini, eduze komfula itheku elikhulu.
Cruises phezu iVolga e Volgograd. imizila okudume kakhulu
Omunye izinkambo ethandwa kakhulu iyona "Volgograd-Moscow-Volgograd". Kungenzeka ukwenza isikebhe ukhululekile "Afanasiy Nikitin" futhi "Ivan Kulibin". travel Ubude besikhathi izinsuku 17, futhi bayakholwa, kuyoba esimnandi kakhulu ukuphila kwakho. Ngemva kwamasonto amabili nje, izivakashi kuyodingeka isikhathi ukuvakashela ezinye kremlins asendulo, amathempeli lasendulo, uthole injabulo enkulu lapho ngiphawula i nezindawo ezinhle ngokungajwayelekile, uphumule emakamelweni ukhululekile, ukunambitha izitsha okulungiselelwe labapheki onekhono nokunye. D.
Okunye imizila adumile Cruises phezu iVolga kusukela Volgograd ukuze Rostov-on-Don futhi Yaroslavl. Bangenza umkhumbi ukhululekile "Anatoly Papanov", "Dmitry Pozharsky" futhi "Alexander saseNevsky". Ikakhulukazi cruise ezithakazelisayo ngo Rostov, ngemva umzila iqala phezu iVolga, bese uya ku-Don ngokushelela. Izivakashi e uhambo olulodwa baziswa echibini kwemifula emikhulu emibili i-Russian, kanye nosiko Cossacks.
Noma ubani oke waba nengxenye cruise emfuleni, isikhathi eside uyakhumbula izinkumbulo ezimnandi lolu hambo emangalisayo, emkhathini ekhethekile ovamile ibhodi, lezo zikhathi lapho umkhumbi uqhela noma osondela ogwini, nokunye. D.
Arkhangelsk - port olubaluleke umhlaba
River Cruises kusukela Petersburg eRussia ukubuyela Petersburg
Introspection esikoleni sabaqalayo sifundo GEF: isibonelo wesifunda kanye isampula
Yikuphi okungcono ukuthenga isibhamu ukushaya? Ukukhethwa kanye nokusetshenziswa kubafuni
Onobuhle abahlukahlukene Amahora